Bit By Bit - Mifehy - 6.6.3 Privacy
Privacy dia zo ny mety fivezivezen'ny vaovao.
Ny sehatra fahatelo izay mety hitarika ny mpikaroka dia ny fiainana manokana . Araka ny Lowrance (2012) , dia tokony "hanaja ny tsiambaratelo izy ireo satria tokony hohajaina ny olona." Ny fahaleovan-tena anefa dia fomba fanao malaza (Nissenbaum 2010, chap. 4) , ary, noho izany dia sarotra izany mba hampiasaina rehefa miezaka manao fanapahan-kevitra manokana momba ny fikarohana.
Ny fomba mahazatra hisaintsaina momba ny fiainana manokana dia miaraka amin'ny dichotomy ho an'ny daholobe / tsy miankina. Amin'izany fomba fisainana izany, raha azo ampiharina ampahibemaso ny fampahalalam-baovao, dia afaka ampiasain'ny mpikaroka tsy misy ahiahy momba ny fanitsakitsahana ny fiainan'ny olona. Saingy mety hiteraka olana izany. Ohatra, tamin'ny novambra 2007, Costas Panagopoulos dia nandefa taratasy momba ny fifidianana ho an'ny rehetra any amin'ny tanàna telo. Any amin'ny tanàna roa-Monticello, Iowa sy Holland, Michigan-Panagopoulos dia nampanantena / handrahona hamoaka lisitr'ireo olona nifidy tao amin'ny gazety. Tao amin'ny tanàna hafa-Ely, Iowa-Panagopoulos dia nampanantena / handrahona hamoaka lisitr'ireo olona tsy nifidy tao amin'ny gazety. Ireo fitsaboana ireo dia natao hanentanana ny hambom-pireharehana sy ny henatra (Panagopoulos 2010) satria ireo fihetseham-po ireo dia nahitana ny fiantraikan'ny fianarana tany aloha (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Fampahalalana momba ny hoe iza no mifidy ary iza no tsy mibaribary any Etazonia; misy afaka mahazo izany. Noho izany, azo atao ny miady hevitra fa noho ny fisian'ity fampahalalam-baovao momba ny fifidianana ity dia tsy misy olana amin'ny mpikaroka iray izay mamoaka izany amin'ny gazety. Etsy ankilany, misy zavatra mahakasika io soso-kevitra io dia mahatsapa ny ratsy ho an'ny olona sasany.
Araka ny asehon'ity ohatra ity, ny dichotomy ho an'ny daholobe / tsy miankina dia tsy dia mena loatra (boyd and Crawford 2012; Markham and Buchanan 2012) . Ny fomba tsara kokoa hieritreretana ny tsiambaratelo-iray natao manokana hifehezana ireo olana naterak'ilay vanim-potoana nomerika-dia ny hevitra momba ny tsy fivadihana ao amin'ny (Nissenbaum 2010) . Raha tokony handinika ny fampahalalam-baovao na ny tsy miankina, dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fampahalalam-baovao ny tsy fitoviana eo amin'ny lafin'ny fotony. Araka ny Nissenbaum (2010) , "ny zo hanana fiainana manokana ny zo na ny miafina na ny zo hifehy fa ny zo sahaza mikoriana ny vaovao manokana."
Ny fotodrafitrasa fototra mifototra amin'ny fotodrafitrasa mifototra amin'ny teny ifotony dia ny seha-pifanerasan-keloka momba ny fampahafantarana (Nissenbaum 2010) . Ireo no fitsipika mifehy ny fitohizan'ny fampahalalana amin'ny sehatra voafaritra manokana, ary voafaritra amin'ny paikady telo izy ireo:
mpilalao (foto-kevitra, mpandefa, mpandray)
toetra (karazana vaovao)
fifindran'ny fitsipika (faneren'ny ambany izay vaovao mivoaka)
Noho izany, raha toa ianao ka mpikaroka no manapa-kevitra ny hampiasa ny angona tsy misy fahazoan-dalana, dia manontany tena izy hoe: "Mampiasa ny teny mifandraika amin'ny fampahalalam-baovao ve izany?" Miverina amin'ny raharaha Panagopoulos (2010) , amin'ity tranga ity, manana ivelany Ny mpikaroka dia mamoaka ny lisitry ny mpifidy na ny tsy mpifidy ao amin'ny gazety dia toa manitsakitsaka ny fitsipika informatika. Mety tsy hoe ny fomba hanampian'ny olona ny vaovao hivoahana. Raha ny marina dia tsy nanaraka ny fampanantenany / fandrahonana i Panagopoulos satria ireo mpiasan'ny fifidianana teo an-toerana no namadika ny taratasy ho azy ary nandresy lahatra azy fa tsy hevitra tsara izany (Issenberg 2012, 307) .
Ny hevitra momba ny teny mifandraika amin'ny haino aman-jery koa dia afaka manampy amin'ny fanombanana ny tranga noresahako tany am-piandohan'ny toko momba ny fampiasana antso an-tariby mandeha amin'ny finday mba hijerena ny fahaleovan-tena nandritra ny fipoahan'ny Ebola tany Afrika Andrefana tamin'ny 2014 (Wesolowski et al. 2014) . Ao anatin'izany toe-javatra izany, dia mety misy sary an-tsaina roa samihafa:
Toe-javatra 1: mandefa antso vatan-kazo feno antontan-kevitra [toetra]; ny fitondram-panjakana ny tsy feno ara-drariny [mpilalao]; na inona na inona azo atao hoavy mampiasa [fampitana fitsipika]
Toe-javatra 2: naniraka ampahany manafina anarana rakitsoratra [toetra]; ho hajaina amin'ny oniversite mpikaroka [mpilalao]; mba hampiasaina ho valin 'ny Ebola valan'aretina sy ambanin'ny fanaraha-mason'ny ny anjerimanontolo etika zana-kazo [fampitana fitsipika]
Na dia ao anatin'ireny toe-javatra ireny aza dia miantso ny angona avy amin'ny orinasa, ny fitsipika momba ny fampahalalam-baovao mikasika ireo toe-javatra roa ireo dia tsy mitovy amin'ny fahasamihafana eo amin'ny mpandray anjara, ny toetra ary ny fitsipika momba ny fifandraisana. Ny fifantohana amin'ny iray amin'ireo safidy ireo dia mety hitondra fanapahan-kevitra tena tsotra. Raha ny marina, ny Nissenbaum (2015) manantitrantitra fa tsy misy na iza na iza amin'ireto fepetra telo ireto dia mety hampihenana ny hafa, ary tsy misy ny iray amin'izy ireo mamaritra ny fitsipika informatika. Ity karazam-pitsaboana telo momba ny fampahalalam-baovao ity dia manazava ny antony mahatonga ny ezaka natao taloha-izay mifantoka amin'ny toetra na ny fitsipika momba ny fifindrana-dia tsy nahomby tamin'ny fisamborana ny hevitry ny fiarovana amin'ny fiainana manokana.
Ny fanamby iray amin'ny fampiasana ny hevitry ny teny manodidina momba ny fampahalalam-baovao momba ny fampahalalam-baovao mba hitarika ny fanapahan-kevitra dia ny hoe mety tsy hahalala azy ireo ny mpikaroka alohan'ny fotoana ary sarotra be ny handrefesana azy (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) . Ankoatr'izay, na dia misy fikarohana aza dia manitsakitsaka ny fitsipika momba ny fampahalalam-baovao tsy miankina izay tsy midika hoe tsy tokony hitranga ny fikarohana. Raha ny zava-misy, ny toko faha-8 ao amin'ny Nissenbaum (2010) dia momba ny "Fifehezana ny tsara ho an'ny tsara." Na dia eo aza ireo zava-tsarotra ireo, ny fitsipika mifandraika amin'ny fampahalalana momba ny fampahalalam-baovao dia mbola fomba tsara hanombohana ireo fanontaniana mifandraika amin'ny tsiambaratelo.
Farany, ny tsiambaratelo dia sehatra iray nahitako ny tsy fifankahazoan-kevitra teo amin'ireo mpikaroka izay manandratra ny fanajana ny olom-pirenena ary ireo izay manome alalana ny tombontsoa. Alao sary an-tsaina ny zava-nitranga tamin'ny mpikaroka momba ny fahasalamam-bahoaka, izay, tamin'ny ezaka natao mba hisakanana ny fihanaky ny aretina nentin'ny virosy, dia nijery an-tsokosoko ny olona nitondra orana. Ireo mpikaroka mifantoka amin'ny tombom-barotra dia mifantoka amin'ny tombontsoa ho an'ny fiarahamonina avy amin'ity fikarohana ity ka mety hiady hevitra fa tsy misy atahorana ny mpandray anjara raha toa ilay mpikaroka nanao azy tamin'ny fitsikilovana tsy misy fahita. Etsy ankilany kosa, ireo mpikaroka izay manandratra ny Fikolokoloana ho an'ny Olona dia nifantoka tamin'ny hoe ny mpikaroka dia tsy nanaja ny olona tamim-panajana ary mety hiady hevitra fa ny voka-dratsy dia noforonina tamin'ny fandikana ny tsiambaratelon'ny mpandray anjara, na dia tsy fantatry ny mpandray anjara aza ny fitsikilovana. Amin'ny teny hafa, ho an'ny sasany, ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelon'ny olona dia manimba ny tenany.
Raha ny fehin-kevitra dia manampy amin'ny fisorohana ny tsiambaratelo ny fanampiana azy ireo ho mihoatra ny dichotomy ho an'ny daholobe / tsy miankina, ary hampisaintsaina ny momba ny fitsipika mifandraika amin'ny fifandraisana, izay misy singa telo: mpandray anjara (subject, sender, receipient), toetra (karazana fampahalalam-baovao), ary fitsipika fampitaovana (famerana ny fampahalalam-baovao) (Nissenbaum 2010) . Ny mpikaroka sasany dia manombatombana ny tsiambaratelo momba ny voka-dratsin'ny fanitsakitsahana azy, fa ireo mpikaroka hafa kosa dia mihevitra ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo ho toy ny loza amin'ny azy. Satria ny fiheveran'ny fiainana manokana amin'ny sehatra nomerika maro dia miovaova amin'ny vanim-potoana, dia miovaova amin'ny olona tsirairay, ary miovaova amin'ny zava-misy eo amin'ny toe-javatra (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) , mety ho loharanom-pitsipika sarotra ho an'ny mpikaroka fotoana ho avy.